Vehivavy sy Miralenta · Janoary, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy sy Miralenta · Janoary, 2017
Tantara mikasika ny Vehivavy sy Miralenta tamin'ny Janoary, 2017
Ny Fahasarotan'ny Fananganana Fiarahana Hanohitra an'i Trump Amin'ny Fomba Mivelatra Sy Andraisan'ny Vehivavy Anjara
Amerika Avaratra30 Janoary 2017
"Ry rahalahy sy ranabavy, raha te-hahazo antoka ianareo fa hoe mizotra amin'ny làlana tsara, ireo vehivavy hafa volonkoditra arahana."
Latsa-bato Mihoatra Ny Iray Dia Afaka Mandràra ny Fanambadian'ny Ankizy i Trinidad sy Tobago
Karaiba30 Janoary 2017
Tsy ho ara-dalàna intsony ao Trinidad sy Tobago ny fanambadian'ny ankizy atsy ho atsy. Lany ny volavolan-dalàna momba ny fehezan-dalànan'ny mariazy, izay nampahafantarin'ny mpampanoa lalàna ao Trinidad sy-Tobago tao amin'ny antenimieran-doholona ao amin'ny firenena, folo andro lasa izay
Pikantsarin'ireo Mpifindra-monina Mpanao Biriky Amoron-drano Ao Myanmar
Azia Atsinanana24 Janoary 2017
Amin'ny tranga sasany, miasa miaraka amin'ny fianakaviany ireo zaza vao dimy taona raha tokony hilalao na hianatra any an-tsekoly izy ireo.
Fampitsaharana ny Fanimbinana Taovam-pananahan'ny Vehivavy sy ny Famoràna Azy ao Afrika
Afrika Mainty19 Janoary 2017
Araka ny voalazan'ny OMS, vehivavy 130 tapitrisa no mijaly na nijaly noho ny fahasarotana nateraky ny famoràna:fanimbinana ny taovam-pananahany ary vehivavy telo tapitrisa no mbola iharany.
Azia Atsimo17 Janoary 2017
Nahazo ny Fankatoavan'ny Firenena Mikambana Ny Fivavahana Amin'ny Renin'Andriamanibavy Vietnamiana
Azia Atsinanana04 Janoary 2017
Manampy amin'ny fankasitrahana ny vehivavy sy ny andraikiny eo anivon'ny fiarahamonina ny fivavahana amin'ny Renin'Andriamanibavy.
Endrika Ivelany Fotsiny Ihany: Ny Herinadro Lasa Teto Amin'ny Rakipeon'ny Global Voices
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Janoary 2017
Tamin'ity herinandro ity, Paragoay, Iràna, Katàra ary Karaiba no nitondranay anareo. (Herinadron'ny 19 Des 16)
Asongadin'ny Fanafihana ny ONG Iray Miady Ho An'ny Zon'ny Mpiasan'ny Orinasa Makedoniana Mpanao Lamba Ny Loza Mananontanona ny Fiarahamonina Sivily
Ny fanafihana ny tranon'ny ONG iray izay manohana ny zon'ireo piasa amin'ny orinasan-damba, dia nampihena ny ezaka hanatsarana ny fepetra mahatsiravin'ny asa any amin'ireo orinasan-damba any Makedonia.
Tsy Firenena Ho An'ny Vehivavy Ve Nepal?
Azia Atsimo02 Janoary 2017
Tsy nahavita nitondra fitoviana ho an'ireo vehivavy ao amin'ny firenena ilay lalàm-panorenan'i Nepal, nefa tsy nitsoaka an-daharana ireo mpiaro zon'olombelona.